ZEC Yokurudzira Veruzhinji Kuti Vaongorore Gwaro Rine Mazita eVavhoti
Sachigaro cheZEC, Justice Priscilla Chigumba
Komisheni inoona nezvesarudzo inoti veruzhinji vanokwanisa kutanga kunotarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti kubva neMugovera ichiti vanga vasati vakwanisa kunyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino vanokwanisawo kunyoresa sevavhoti.
Vachitaura nevatori venhau, sachigaro weZimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC, Amai Priscilla Chigumba, vati komisheni yavo yagadzirira zvakakwana kuti veruzhinji vaende kunotarisa mazita avo kuti arimo here mugwaro revavhoti kubva mangwana kusvika musi wa29 mwedzi uno, vakakurudzira veruzhinji kuti vashandise mukana uyu kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino.
Amai Chigumba vatiwo veruzhinji vanenge vawana zvakakanganiswa, dzingave nhamba dzechitupa, mazita avo kana nzvimbo dzavanoda kuvhotera, vane mukana wekugadzirisa panguva inenge ichongororwa gwaro revavhoti.
Vatiwo pane rimwe gwaro rechipiri rine zvakakanganiswa mukunyoreswa kwaiitwa vanhu sevavhoti ravari kudaidza kuti exclusionary list, iro rine vanhu vanosvika zviuru gumi nechimwe vachiti veruzuzhinji vakanyoresa sevavhoti vakashaya mazita avo mugwaro rekutanga vanokwanisa zvakare kutarisa gwaro rechipiri vobva vagadzirisa zvakakanganiswa, ingave mifananidzo kana mazita avo nezvimwe zvakadaro.
Amai Chigumba vazivisawo zvakare kuti vatori venhau pamwe nevanomirira mamwe masangano akaongorora chirongwa chekunyoresa havachasungirwa kubhadhara mari dzekunyoresa patsva kuti vaongorore kuongororwa kwegwaro revavhoti kuri kutanga mangwana uku.
Vati vakaongorora kunyoreswa kwevavhoti vanosungirwa kubhadhara madhora maviri chete emari inoshandiswa kugadzira makadhi matsva kwete mari yakatarwa neZEC kunzi ibhadharwe nevatori venhau pamwe nevemasangano akazvimirira pakuongorora gwaro revavhoti.
Vakange vasina kumbenge vakanyoresa pakutanga ndivo vachange vachisungirwa kubhadhara mari yakatarwa neZEC iyo yanga ichigunun’unwa nayo nevatori venhau pamwe nevemasangano aya kuti yakawandisa.
Amai Chiigumba vati pachapera chirongwa chekutarisa mazita kuti arimo here mugwaro revavhoti kana kuti voters roll, ndipo pachagadzirwa gwaro revavhoti rizere mutungamiri wenyika ozotara zuva richaitwa sarudzo.
Zvichakadai, mapato ose ezvematongerwo enyika akurudzira veruzhinji kuti vaende kunotarisa mazita avo mugwaro revavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino.